छातीमा हात राखेर सोचौं, भ्रमको खेती नगरौं | सप्तरी जागरण
छातीमा हात राखेर सोचौं, भ्रमको खेती नगरौं
Posted by वैद्यनाथ यादव on November 25, 2017 in लेख / रचना
जहाँसम्म उपेन्द्र यादवको विषयलाई लिएर उठान गरिएको नकारात्मक टिप्पणीको कुरा छ ,उनी नत टुरिष्ट उम्मेदवार हुन् न उनले जातीय आधारलाई मात्र लिएर यहाँबाट उठेका हुन् । मधेशको मुद्दालाई लिएर पटक पटक मधेश आन्दोलनको अगुवाई गरेर जनताको मनमष्तिष्कमा जसले घर बनाई सकेको छ,उसका बारेमा अनावश्यक टिप्पणीको हावाले कदापि छुन सक्दैन ।
सप्तरीमा यस पल्टको निर्वाचनको चुनावी माहोल विशेष रोमाञ्चपूर्ण बन्दै छ । खास गरी सदरमुकाम समेत रहेको क्षेत्र नं.२ को निर्वाचनको बारेमा नै चुनावी समीक्षा तथा अड्कलवाजी बढी जसो केन्द्रीत बन्न पुगेको हो ।
खासगरी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि यसै क्षेत्रबाट यस पटक उम्मेदबार बनेका कारणले पनि यो क्षेत्रको चुनावी भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने जिज्ञासा देशव्यापी रुपमै रहेको छ,जुन स्वाभाविक पनि हो । राष्ट्रिय उँचाई हासिल गरिसकेका यादवले सुनसरी,मोरंगबाट यस अघि उम्मेदवारी दिने गरेकोमा यस पटक सप्तरीबाट उम्मेदवारी दिएपछि मतदातामा एक प्रकारको उल्लास समेत नरहेको होईन । तर यसका वावजुद पनि उनलाई पर्यटक उम्मेदबार भन्दै छेउकुनाबाट टिप्पणी समेत हुने गरेको छ ।
उपेन्द्र पर्यटक उम्मेदबार भए भन्दा पनि यस पटक उनी आफ्नो जन्मस्थानमा आएर उम्मेदबार बन्नुलाई निश्चय पनि सकारात्मक मान्नु पर्ने हुन्छ । स्वयम् उनले पनि सप्तरीबासी जनताको भाननालाई सम्मान गर्दै आफू यसपालि यहीँबाट उठ्ने निर्णय गरेको बताईसकेका छन् । उसो त आफ्नो जिल्ला बाहेक अन्यत्रबाट पनि चुनाव लड्न पाईने कानुनी व्यवस्थाकै आधारबाट कोहि व्यक्ति उम्मेदवार बन्न चाहन्छ भने पनि त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । चुनाब जहाँबाट लड्दा पनि मत दिने अन्तिम हकदार भनेका जनता नै हुन् । हो,एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने अध्यक्ष यादवले यस पटक आफ्नो चुनावी क्षेत्र परिवर्तन गरेका छन् ।
यसलाई लिएर अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्नुभन्दा पनि सकारात्मक रुपले ग्रहण गर्न सक्दा नै त्यो उचित हुनेछ । आफ्नो जन्मस्थानबाट उम्मेदबार बन्दा उनले के बिगारे ? क्षेत्र परिवर्तन गरेर निर्वाचनमा जाने पहिला व्यक्ति पनि होईनन् उनी । विगतदेखि सर्लाहीबाट चुनाव लड्दै आएका राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर यसपालि महोत्तरीबाट उठेका छन् । सर्लाहीबाटै लड्ने गरेका अर्का नेता राजेन्द्र महतो धनुषाबाट यसपटक भिडेका छन् ।
सिरहाबाट दोस्रो संबिधानसभा निर्वाचनमा विजयी भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यो पटक आफ्नो जिल्ला चितवनबाट चुनाव लड्ने कुरा गर्वकासाथ बताईरहेका छन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन रोल्पाबाट जितेका दाहाल सिरहाबाट उठ्दा पनि त्यहाँका जनताले जिताएरै पठाएका हुन् । यसै गरी एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आफूले निरन्तर चुनाव लडेको रौतहट छाडेर काठमाण्डौंबाट उठेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरी चुनाव लड्ने नेताहरुको लामै लिष्ट तयार हुन सक्दछ । तर,यति वेला उपेन्द्र यादव माथि नै यस प्रकारको तीतो टिप्पणी गर्नु पर्ने आवश्यकता किन आई पर्यो? कतै यो पराजयको भूतले पछ्याएर त होईन ? प्रश्न त यहाँनिर उठ्न सक्दछ । यति वेला सप्तरी क्षेत्र नं.२ मा कस्तो उम्मेदवारलाई जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने विषयमा जातिय कुरालाई समेत कतै कतै उठान गर्न थालिएको छ ,जुन सदियौंदेखि चल्दै आएको सौहार्द तथा सहिष्णुतापूर्ण हाम्रो सामाजिक संरचनाको प्रतिकूल पनि देखिन्छ ।
कुन उम्मेदवारलाई भोट दिने भन्ने अन्तिम निर्णायक भनेका फेरि पनि प्रबुध्द तथा विवेकशील मतदाता नै हुन् । जहाँसम्म उपेन्द्र यादवको विषयलाई लिएर उठान गरिएको नकारात्मक टिप्पणीको कुरा छ ,उनी नत टुरिष्ट उम्मेदवार हुन् न उनले जातीय आधारलाई मात्र लिएर यहाँबाट उठेका हुन् । मधेशको मुद्दालाई लिएर पटक पटक मधेश आन्दोलनको अगुवाई गरेर जनताको मनमष्तिष्कमा जसले घर बनाई सकेको छ,उसका बारेमा अनावश्यक टिप्पणीको हावाले कदापि छुन सक्दैन ।
समस्त उपेक्षित,उत्पीडित जनता यसका साक्षी छन् । देशमा विद्यमान सबै प्रकारका उत्पीडन तथा विभेदको अन्त्य हुनु पर्छ भन्ने फराकिलो सोचका साथ सबै उत्पीडितहरुको सहभागिता तथा एकताबध्द आवाजको संग्रह गर्ने कामको अगुवाई समेत उपेन्द्र यादवले गरि नै रहेका छन् । पहाडका उपेक्षित जनताको समेत आवाज वोल्ने फराकिलो सोच लिएर अघि बढेका उनलाई जात,सम्प्रदाय तथा क्षेत्रमा मात्र बाँधेर मूल्यांकन गरिन्छ भने त्यो उनीप्रतिको अन्याय सिवाय केही हुने छैन । त्यसैले भ्रमको खेती गरेर आत्मरति लिनुभन्दा वास्तविकताको धरातलमा टेकेर विचार गरियो भने देखिने छ,त्यहाँ ज्वाइँ पाहुना उम्मेदवार पनि कोही होलान् ।